Kusho ukuthini uma sikhuluma yobisi imibala? It kuvela ngokuphelele izinto ezahlukene ... Yini uxhuma snowdrops ezihlukahlukene itiye Chinese, spice ezifana amakinati, kanye mozzarella - ezihlukahlukene Italian ushizi? Futhi lapha Milky? Zama ukuqonda ...
Snowdrop - ubisi imbali
Latin igama Snowdrop, galanthus, elungiselelweni Russian "Milky". Photo ngezansi kwenza kube lula ukuba ngiqonde ukuthi kungani kwathiwa exhunywe igama layo - izimbali ezimhlophe zalesi sitshalo ngaphansi ifomu ngempela zifane amathonsi ubisi.
Abantu snowdrops eyaziwa kusukela ezikhathini zasendulo. Basuke okukhulunywa Homer ngaphezulu, echaza Ukuzula ka Odysseus. Ngokusho yetinsita le snowdrops (Moli utshani) iqhawe abadumile wanika Hermes unkulunkulu ukuze wakwazi ukumelana the izintelezi of uyathakatha Circe.
Ubude akhawunti "Milky" I-nesishiyagalombili zilwane. Emvelweni ziseZwini emaphakathi futhi eningizimu Yurophu kanye e-Asia kanye eCaucasus. Namuhla, lesi sitshalo kubhekwa ezingavamile: zonke izinhlobo wokuvikela futhi ezisohlwini Red Data Books emazweni amaningi.
Amahlamvu zalesi sitshalo kuthiwa side, ewumngcingo, njengoba umthetho, ukukhanya noma oluhlaza emnyama. Izimbali ezime njengesitebhisi izinsimbi ezincane ezimhlophe namabala oluhlaza. imbali ngayinye amacembe eziyisithupha, ezintathu ngaphandle futhi ezintathu ngaphakathi.
Snowdrops ezikhulayo hhayi kuphela endle. olubabazeka kakhulu, babheka engadini - izihlahla, e flowerbeds noma utshani. Izimbiza emphemeni futhi ifasitela Sills Ungase futhi ukhule ube "Milky" (ngezansi - akuyona version kuphela emphemeni like abamba ukushisa).
Uma ukudala i-ama zalesi sitshalo izimo ezikahle, snowdrops izimbali Kuyoze kube ukujabulisa iso.
Ubisi Oolong - Fire Flower
tea oolong, oolong noma - ekhethekile uhlobo itiye nge ukuvutshelwa degree Lesisemkhatsini emkhatsini webahlali oluhlaza. Ethandwa kakhulu phakathi zezinkambi kulesi sigaba - ubisi oolong.
Ikhaya kule ezihlukahlukene itiye Taiwan. Khiqiza ke ngesisekelo itiye, onegama Golden Imbali (Jin-Xuan). Sikhula ezintabeni endaweni engamamitha cishe ikhilomitha. Ukuqoqwa itiye senzeka kabili ngonyaka entwasahlobo and ekwindla.
Ngenxa yegama ubisi oolong itiye, kanye waveza ukunambitheka alube itiye ukwenziwa owandile onganembile ukuthi ugcwala ngendlela ekhethekile ubisi. Kodwa eqinisweni, lokhu itiye asisho ukukhiqiza.
Empeleni, kunezindlela ezimbili ubisi ukunambitheka oolong ukuphi. Okokuqala, impela isikhathi esiningi futhi kuyabiza, kufaka ukucutshungulwa itiye ezihlabayo nge isixazululo of umoba. Ngemva kwalokho, izimpande zezitshalo bazithela ubisi ngamunye, buhlanjululwe ngamanzi, bese ufafaza husks isitshalo irayisi. Indlela yesibili lula futhi ashibhile - amaqabunga tea kakade kuvuna kukhona enongiwe, kusetshenzwe ubisi akhiphe, eyagcina futhi kuholela elamukelekile.
Njengoba kuyinto phisa wesiko ubisi oolong
Kungcono yenza itiye in a ubumba noma iphosilini embizeni. Oku-tank Kunconywa parboiled - kubalulekile ukuze uqede iphunga nezingahlobene nendaba. Lokhu okulandelayo ugcwalise itiye kusukela kule ukubala: ithisipuni elilodwa amaqabunga etiye komuntu oyedwa, bese wengeza amanzi, selehlile degrees ayisishiyagalolunye nanhlanu. Ngaphambi ukusetshenziswa, kufanele inikezwe Oolong Hlala for ngomzuzu owodwa. Brew ubisi oolong kungaba izikhathi eziyisishiyagalombili ilandelana, futhi isikhathi ngasinye uhlobo yakhe izovela amanothi amasha.
Photo elingezansi libonisa omunye edume kakhulu emhlabeni zamakha - amakinati.
Muskatnik - kuyinto isihlahla esihlale siluhlaza bukhule ikakhulukazi emazweni ase-Asia nase Polynesia, i-Ningizimu Melika nase-Afrika. iphunga Bright ukunambitheka okubabayo-hot lokhu spice kusukela ezikhathini zasendulo asetshenziswe ekukhiqizeni confectionery nokupheka.
Njengoba spice esetshenziswa zonke izinhlobo ezintathu izitshalo, okuyinto lo esivame kakhulu fragrans Myristica. imbewu yayo futhi akulutho ngaphandle "amakinati." Kodwa "Mace" noma Mace - powder ophuzi, ukunambitheka obucayi xaxa kunaleyo imbewu muskatnika - empeleni wenza hhayi kusukela izimbali. It is omisiwe istolchonny e powder prisemennik - mncane esikhumbeni esithambile kuyinto ngesimo amacembe, okuyinto lihambisana imbewu yayo. Zesidlaliso "Milky", ngezinye izikhathi wasebenzisa kubo ngokungalungile, kepha walungisiswa iqiniso lokuthi Mace kuyinto zithandwa njengenhlangano okufakiwe e eziningi avalele izitsha. Ngakho, ngo-cuisine European futhi Asian lokhu spice efakwa eziningi ezincane ezihlukahlukene amasobho alube, nososo kanye iziphuzo esekelwe ubisi. Lokhu spice futhi ivame enongiwe ezihlukahlukene ushizi cottage shizi. Lokho Mace kuyinto isinongo zakudala, okuyinto ingxenye abadumile French yobisi sauce "Bechamel".
A ngaphezulu "ubisi imbali" - kuyinto ... ushizi!
Futhi manje amazwi ambalwa mayelana ... mozzarella. Yini uxhumanisa abadumile ushizi Italian futhi "Milky"?
Iqiniso lokuthi igama "mozzarella" empeleni ihlanganisa izinhlobo eziningana ushizi. I version zakudala - Mozarella di Bufala - premium grade umkhiqizo esenziwe Italy ngokuqondile ubisi black inyathi. Kuvamile kakhulu emhlabeni lomunye uhlobo ushizi - Fior di Latte, okuhunyushwa ngokuthi "ubisi imbali". Yenziwe ubisi lonke inkomo, wakhetha ubisi enzyme imvubelo zemvelo, lolu hlobo mozzarella ukunambitheka fresh kuka version zakudala. Nokho, ushibhile, kufinyeleleke futhi uyakwazi kwi-brine (cleaner igcwele) kufika ku ngenyanga eyodwa.